Voarara ao Brunei tokoa ve ny krismasy? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Desambra 2015 19:42 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Aymara, Français, русский, English
Miozolomana no maro an'isa ao Brunei. Firenena kely anjakàn'ny ‘sultan’ iray mitazona tanteraka sy manontolo ny fahefana ara-politika.
Ny olana faharoa mila azavaina dia tsy mampihatra fandrarana manontolo ny fetin'ny krismasy i Brunei. Mbola afa-mankalaza ny krismasy any an-tranony, ao amin'ny fikambanana ary ny toeram-pivavahana ireo tsy miozolomana sy ny vahiny. Mivohitra ao amin'ny fanambarana an-gazety nataon'ny Minisiteran'ny raharaham-pivavahana nivoaka tamin'ny herintaona izany:
Tamin'ny fanombohan'ity volana ity ny imam na ny miozolomana mpitondra fivavahana sasany, nanitrikitrika ny fampitandremana fa mety hanimba ny Islam ny fankalazana ny Krismasy :
Ny vaovaon'ny fandrarana krismasy ao Brunei dia nampisy aingam-panahy avy amin'ny mpiserasera maro manerana izao tontolo izao haneho firaisankina amin'ny alalan'ny diezy #MyTreedom. Ny torolalana ihany koa dia mandrara ny fametrahana hazo krismasy amin'ny toeram-bahoaka.
Nampanahy ireo vondrona maro mpandala ny zon'olombelona ny fanapahan-kevitr'i Brunei handray sy hampihatra manontolo ny fampihana ny lalàna Sharia tamin'ny herintaona, izay manasongadina ny fitoraham-bato ho faty noho ny fijangajangana, fanapahan-drantsana noho ny halatra, ary ny fikapohana (an-karavasy) amin'ny fandikan-dalàna tahaka ny fanalàna zaza, fisotroana toaka ary ny fiarahan'ny olona mitovy taovam-pananahana.
Tamin'ny famaliana ny tsikera dia nandrisika ny firaisamonina iraisampirenena i Datin Hjh Hayati Lehiben'ny Fampanoavan'i Brunei handalina ny lafy tsarany misongadina ao amin'ny lalàna: